TradeFred एक वैश्विक अनलाइन विदेशी मुद्रा र CFD छ व्यापार मंच. वित्तीय र ग्राहक समर्थन विशेषज्ञता हाम्रो विशेषज्ञ संयोजन सुनिश्चित गर्दछ हामी तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत लगानी शैली बनाइएको लगानीको अनुभव प्रस्ताव. हामी उद्योग मा एक विश्वसनीय नाम हाम्रो स्थिति कायम गर्न प्रयास, हाम्रो नैतिक र ग्राहक-उन्मुख दृष्टिकोण धन्यवाद.
तिमी किन TradeFred सामेल गर्नुपर्छ?
– प्रथम श्रेणी व्यापार अनुभव, मात्र को साँघुरो सर्छ सहित 0.1 पिप्स.
– विशेषज्ञ स्रोतहरू आफ्नो इष्टतम व्यापार रणनीति तैयार डिजाइन.
– ध्यान भंग मानव भावना बिना खुला नयाँ व्यापार स्थान.
– धेरै भुक्तानी विधिहरू मार्फत केवल एउटा काम गरेर दिन मा आफ्नो पैसा छिटो पहुँच.
– उच्च व्यापार, विश्वसनीय अर्डर प्रशोधन र छिटो कार्यान्वयन.
– निःशुल्क प्रशिक्षण स्रोतहरू एक लाइब्रेरी संग असीमित डेमो लगानी खाता.
– ग्राहक सम्पत्ति पहिलो-वर्ग बैंकहरू आयोजना गरिन्छ, हाम्रो आफ्नै पैसा पूर्णतया अलग.
– समर्पित खाता प्रबन्धक र बहुभाषी ग्राहक सेवा टोली.
– मात्र एक कम प्रारम्भिक लगानी संग विदेशी मुद्रा र CFDs व्यापार सुरु $ 250.
विदेशी मुद्रा नयाँ? एक समर्थक जस्तै व्यापार र सबै कुनै समय मा आफ्नो लगानी यात्रा सुरु गर्न सिक्न.
महंगा सामाग्री भुक्तान छैन. यी समय र पैसा बचत मुफ्त उपकरण को TradeFred एकेडेमी बाट:
TradeFred गरेको उत्पादन:
TradeFred मा केंद्रित विदेशी मुद्रा व्यापार र CFDs. तिनीहरूले बजार को पर्याप्त दायरा भन्दा बढि कवर, संग लगभग 50 एक्लै FX खण्ड समावेश मुद्रा जोडी.
विदेशी मुद्रा व्यापार को कार्यान्वयन स्पष्ट ठूलो छ, र, जबकि साइट धेरै प्रतिस्पर्धी सर्छ प्रदान गर्दछ, हामी TradeFreds सर्छ निश्चित छन् दर्शाउन पर्छ. जोडी विदेशी मुद्रा लागि अधिकतम सम्भव लाभ छ 1:50.
शेयर खण्ड छ एक “शानदार कार्यान्वयन” ठूलो सर्छ र व्यापक बजार कवरेज संग जोडीएको. यो उत्पादन श्रेणी लागि अधिकतम लाभ मात्र हो 1:10.
सूचकांक खण्ड देखि बजार समेट्छ6महादेशमा पनि प्रतिस्पर्धी सर्छ प्रदान गर्दछ. अधिकतम लाभ पनि अलिकति यस श्रेणीका कम छ: यो सेट थियो 1:25.
यस्तो सुन रूपमा बहुमूल्य धातु, चाँदी र प्लेटिनम सधैं व्यापारीहरु संग लोकप्रिय छन्. TradeFred मा, प्रयोगकर्ता राम्रो सर्छ र अधिकतम लाभ यस्तो धातु व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ 1:25.
कुनै पनि साँचो र सम्मानित दलाली जस्तै, TradeFred यसको मंच भेटी को centerpiece रूपमा MT4 प्रयोग. TradeFred द्वारा प्रस्तावित सबैभन्दा शक्तिशाली मंच को MT4 डेस्कटप व्यापारी छ, जो MT4 चार्ट बनाउन समाधान र प्राविधिक विश्लेषण उपकरण पूरा सुइट आउँछ.
रेखाचित्र समयसीमाको को एक प्रभावशाली सीमा प्रदर्शित गर्न सकिन्छ, अनुकूलित गर्न सकिन्छ, र ग्राफ टेम्प्लेट व्यापारीहरु पछि तिनीहरूलाई पुन: प्रयोग गर्न सक्छन् बचत गर्न सकिँदैन. प्रौद्योगिकी विश्लेषण लागि जाँदा, बारेमा 50 संकेतक प्लेटफर्म पूर्व-स्थापित. को पाठ्यक्रम, व्यापारीहरु तिनीहरूले किन्न भनेर पनि अधिक संकेतक स्थापना गर्न छनौट गर्नुहोस् वा निःशुल्क खरिद गर्न सक्नुहुन्छ. प्रयोगकर्ता पनि आफ्नै संकेतक सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ.
MT4 गरेको तागत को एक ईएएस मा निहित (विशेषज्ञ सलाहकार) कि व्यापारीहरु स्वचालित व्यापार को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. साथै, TradeFreds MT4 विदेशी मुद्रा र एउटै स्क्रिनमा CFDs को व्यापार सक्षम र पनि विशेषज्ञ बजार विश्लेषण र शैक्षिक सामाग्री पहुँच रूपमा विशेषज्ञ ग्राहक हेरविचार प्रदान.
MT4 को TradeFred वेबसाइट मुक्त लागि डाउनलोड गर्न सकिन्छ.
TradeFred एक सजिला डेमो खाता व्यापारीहरु एक जोखिम-मुक्त परीक्षण स्पिन मा मंच लिन अनुमति दिन्छ प्रदान गर्दछ. डेमो खाता समावेश $ 10,000 भर्चुअल धन र शैक्षिक सामाग्री को धेरै मा. खाता लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ 14 दिन, त्यसपछि यो सिर्फ समाप्त हुन्छ.
आधारभूत खाता शुरुआती लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ. यस खातामा आवश्यक न्यूनतम जम्मा मात्र हो $ 260 र अधिकतम लाभ छ 1:50. खाता साथै समर्पित प्रबन्धक एक व्यापार दिन withdrawals छ.
मानक खाता पनि सबैभन्दा व्यापारीहरु पहुँचयोग्य छ, शुरुआती र उन्नत प्रयोगकर्ता. आवश्यक न्यूनतम जम्मा छ $ 500, र अधिकतम लाभ पनि छ 1:50. मात्र थप सुविधा मानक खाता मूल माथि छ यो प्रदान गर्दछ बजार विश्लेषण छ.
यो विस्तारित खाता न्यूनतम जम्मा आवश्यक $ 1,000. व्यापारिक अवस्था ती माथि उल्लेख गरिएका छन्, तर खाता पनि सीधा व्यापारीहरू मोबाइल फोन वितरित छन् कि व्यापार संकेत समावेश.
एक न्यूनतम जम्मा संग $ 5,000, समर्थक खाताको लागि खेल व्यापारीहरू पहुंच बाहिर छ. बजार विश्लेषण खाता यस श्रेणी मा जो गिर ग्राहकहरु मद्दत गर्छ, र सर्छ समर्थक-खाता व्यापारीहरु लागि कम छन्.
यो प्रिमियम खाता बोर्ड को शीर्ष मा छ: न्यूनतम जम्मा छ $ 10,000. जबकि व्यापार अवस्था माथिको हदसम्म उस्तै, यो खाता अनिवार्य शून्य-स्वाप खाता छ.
TradeFred भिडियो समीक्षा
YouTube मा यो भिडियो हेर्नुहोस्
TradeFred संसारको प्रमुख लगानी मंच सञ्चालन गर्न गर्व छ – MetaTrader 4. यो भिडियो मा, हामी मंच र उपलब्ध आधारभूत सुविधाहरू प्रयोग गर्न व्याख्या हुनेछ.
तपाईंको विदेशी मुद्रा ज्ञान बढावा मुफ्त संकेत *
किन महंगा संकेत भुक्तानी मुफ्त लागि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छन् जब?
तपाईंको मौका नगुमाउनुहोस्. दावी TradeFred सामेल
तपाईंको संकेत र आफ्नो लगानी कौशल सुधार.
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 21.08.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 22.08.2018